Dagaal ka dhacay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Muqdisho (Keydmedia) - Dagaallo u dhaxeeya Ciidamada dowladda KMG ah ee Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa AMISOM iyo Kooxda Al Shabaab ayaa xalay waxa uu ka dhacay Xaafado kamid degmada Kaaraan ee Gobolka Banadir.
Dadka deegaanka oo la hadlay Kedmedia ayaa sheegay in dagaalka uu bilowaday kadib markii Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay weerar madaafiic ah ku qaadeen Saldhigyo Militeri oo ay Askarta dowlada KMG Soomaaliya ku leeyihiin duleedka Degmada Kaaraan ee Magalada Muqdisho.
Si rasmi ah looma oga qasaraha ka dhashay dagaalka, hase ahaatee dadka fara ku tirsika ah ee ku nool Xaafado ay ka mid yihiin Xaliimo-Heyte, Keysanay iyo Sarta Habar-Gaalo ee Degmada Karan ayaa sheegay in Qoysas badan ay saaka ka baracakayaan Xaafadahooda.
Madaafiicda ay isweedaarsadeen dhinacyada dagaalka ayaa waxa ay ku dhaceen Goobo ka baxsan meelaha lagu dagaalamay.
Dhinaca kale Saraakiil Ciidamada dowladda KMG oo la hadalya Warbaahinta saakay ayaa sheegay in Khasaaro Dhimasho iyo Dhaawac ah ay gaarsiyiin Maleeshiyaadka Shabaab ee weerarka kusoo qaaday Saldhigyadooda Degmadda Kaaraan.
Dagaalka ayaa imaanaya xilli Afhayeen u hadlay Kooxda Shabaab oo lagu magacaabo Cabdi Casiis Abu Muscab uu Shalay sheegay inay weli ku suganyihiin Gudaha magaalada Muqdisho islamarkaana ay sii wadi doonaan dagaallada iyo Qaraxyada ka dhanka ah Dowladda KMG iyo AMISOM.